Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Category | Disaster – ဘေးအန္တရယ်များ
Category Archives: Disaster – ဘေးအန္တရယ်များ
Posted on October 25, 2017 by freeburma
​မြေပြိုမှုသတင်း​ကြောင့် ပုပ္ပါးတောင်ကလပ်ကို ဘုရားဖူး အလာနည်းပါးသွား
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် ပုပ္ပါးတောင်ကလပ်အနီး မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မြေပြိုမှုသတင်းတွေကြောင့် ဘုရားဖူးပြည်သူတွေ အလာနည်းသွားပြီး ဈေးဆိုင်ရှင်တွေ အခက်အခဲတွေ့နေပါတယ်။
ပုပ္ပါးတောင်ကလပ်မှာ မြေပြိုလို့ တောင်တွေ တိမ်းစောင်းသွားပြီး မြေပြိုတာဟာ ပုပ္ပါးမီးတောင်ကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ပြောဆို ရေးသားနေတာတွေဟာ ကောလာဟလ သတင်းတွေသာဖြစ်ပြီး အခုလို မြေပြိုမှုဟာ ပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်သာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံ ဦးကျော်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
လတ်တလော ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ သတင်းတွေဟာ ကောလာဟလတွေဖြစ်ပြီး ခုလို မြေပြိုမှုတွေ အရင်နှစ် မိုးများချိန်တုန်းကလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
မြေပြိုတဲ့ ကားလမ်းပေါ်ကို လတ်တလော ခရီးသွားကားတွေ ဝင်ရောက်တာကိုတော့ တားမြစ်ထားပြီး ဆိုင်ကယ်တွေတော့ ဖြတ်သန်းသွားလာနေကြပါတယ်။
The post ​မြေပြိုမှုသတင်း​ကြောင့် ပုပ္ပါးတောင်ကလပ်ကို ဘုရားဖူး အလာနည်းပါးသွား appeared first on DVB.
from DVB http://ift.tt/2lfkY1G
Posted on October 28, 2016 by freeburma
from VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2ePlYVP
Posted in Disaster - ဘေးအန္တရယ်များ	| Tagged Disaster, Feedly, IFTTT	| Leaveacomment |
Posted on October 21, 2016 by freeburma
အောင်စိုးမိုးကျော်အမြန်ရေယာဉ်နစ်မြုပ်ပြီး သေဆုံးခဲ့သူများရဲ့ မိသားစုများနဲ့ ထပ်တူ ၀မ်းနည်းကြေကွဲပါကြောင်း အစိုးရက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက် ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာ “ဖြစ်စဉ်၌ သေဆုံးခဲ့သူများ၏ မိသားစုများနှင့် ထပ်တူ ၀မ်းနည်းကြေကွဲပါကြောင်း၊ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် ခရီးသည်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများက လိုအပ်သည့် ကူညီထောက်ပံ့မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ယင်းဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားမှုအပေါ် စနစ်တကျ စစ်ဆေး၍ တာဝန်ရှိသူများကို ဖော်ထုတ် အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း” ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်က စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ကနီမြို့နယ်၊ ကင်းအုပ်စု၊ မိချောင်းတွင်းကျေးရွာအနီးမှာ ဟုမ္မလင်းမြို့ကနေ မုံရွာမြို့ကို ထွက်ခွာခဲ့တဲ့ ချင်းတွင်းမြစ်တွင်းသွား အေးငြိမ်းချမ်းသာ အမြန်မော်တော်ရေယာဉ်လိုင်းမှ အောင်စိုးမိုးကျော် (၂) အမြန် ရေယာဉ်တိမ်းမှောက်နစ်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ရေယာဉ်နစ်မြုပ်မှုအတွင်း ခရီးသည် ၁၆၀ လောက် ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး အလောင်း ၇၀ ကျော် ဆယ်ယူရရှိခဲ့တယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
The post အမြန်ရေယာဉ်နစ်မြုပ်မှုတွင် သေဆုံးသူများအတွက် ၀မ်းနည်းကြောင်း အစိုးရ ထုတ်ပြန် appeared first on DVB.
from DVB http://ift.tt/2ez3a9N
Posted on October 20, 2016 by freeburma
အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မောင်တောမြို့နယ်က ပိတ်မိနေတဲ့ ပထမအဆင့် ဦးစားပေး ကျေးရွာ ၃၀ ကျော်ထဲ လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာတွေ ပို့ဖို့ အခက်အခဲရှိနေပါတယ်။
လက်ရှိမှာလည်း ကျေးရွာ ၃ ရွာကိုပဲ စားနပ်ရိက္ခာတွေပို့ပေးနိုင်သေးပြီး ပိတ်မိနေတဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ အပြင်ထွက်ပြီး အလုပ်မလုပ်ရဲကြသလို အကြမ်းဖက်ခံရမှာ ကြောက်တာကြောင့် နေအိမ်တွေ ကင်းစောင့်နေရတယ်လို့ မောင်တောမြို့နယ်၊ ကန်ချောင်းကျေးရွာနေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်သန်းကပြောပါတယ်။
“တောထဲ တောင်ထဲလည်း မသွားရဘူး၊ ထင်းခုတ်ဖို့လည်း မသွားရဘူး။ ကျနော်တို့ရွာသားတွေက ထင်းခုတ်ပြီးတော့ စားနေရတာ။ တနေ့ရှာမှ တနေ့စား လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရတာ။ အခု ညမထွက်ရအမိန့် အတိုင်းတာနဲ့ဆိုတော့ ဘယ်လို ပြောရမလဲ။ တခုမှ သွားလို့မရတဲ့အတွက် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲနဲ့ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။”
အကြမ်းဖက်ခံရပြီးနောက်မှာ ကျေးရွာထဲကနေ လူတွေ အပြင်ထွက်ပြီး အလုပ်မလုပ်ရဲလို့ အခုဆိုရင် စားဖို့ သောက်ဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေကြရပါတယ်။
ကိုင်းကြီးကျေးရွာနေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးခင်မောင်သန်းက “ကျနော်တို့ အခုလက်ရှိ စားဝတ်နေရေးကတော့ ဒီလို အကြမ်းဖက်ဖြစ်တဲ့နေ့ကနေခုထိ အပြင်မထွက်ရဘူး။ ကျနော်တို့လူမျိုးတွေက ထင်းခုတ်ပြီးတော့ ရောင်းစားတာ။ အခု အပြင်ဘက်မထွက်ရဘူးဆိုတော့ ကျနော်တို့ စားဝတ်နေရေး တအားအခက်အခဲရှိတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေအနေမှာတော့ ပိတ်မိနေတဲ့ ဦးစားပေးကျေးရွာတချို့ကိုလည်း စားနပ်ရိက္ခာတွေပို့ဖို့ လာနေတဲ့ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကိုဝေဠုကျော်က “သူတို့ရွာကတော့ လုံခြုံရေးတွေ ဘာတွေ သူတို့ဘာသာသူတို့ စည်းကမ်းနဲ့ နေကြတဲ့အခါမှာတော့ အခုထိတော့ ထိပ်တိုက် ဘာမှ မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်။ နောက် သူတို့မှာ တွေ့လာဖို့လည်း သူတို့က စိုးရိမ်တဲ့အတွက် အခက်အခဲရှိနေတယ်။ ပြီးတော့ စားနပ်ရိက္ခာကလည်း သူတို့မှာ နည်းသွားပြီပေါ့နော်။ အခြေအနေက သူတို့မှာ ရွာအပြင်ကို ထွက်ရဲတဲ့အခြေအနေ မရှိဘူး။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် လိုအပ်တာလေးတွေ ကျနော်တို့ လာကူညီတာပါခင်ဗျ” လို့ ပြောပါတယ်။
နေရပ်စွန့်ခွာပြီး ယာယီဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ခေတ္တခိုလှုံသူတွေဟာ မောင်တောမြို့မှာ ၃၀၀ ကျော်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့မှာ ၁၃၀၀ ကျော်၊ စစ်တွေမြို့မှာ ၈၀၀ ကျော် ရှိနေပါတယ်။
မောင်တောနဲ့ ဘူးသီးတောင်ဒေသတွေမှာ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်လာပြီး နီးစပ်ရာ ဆွေမျိုးတွေဆီ နေသူတွေ ၁၀၀၀၀ ကျော်လောက် ရှိနိုင်တယ်လို့ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေက စုံစမ်းသိရပါတယ်။
The post မောင်တောကျေးရွာ ၃၀ ကျော် လုံခြုံရေးကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာပို့ရန်ခက်ခဲနေ appeared first on DVB.
from DVB http://ift.tt/2eTArR4
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကနီမြို့နယ် မိချောင်းတွင်းကျေးရွာအနီး အောင်စိုးမိုးကျော် ရေယာဉ် နစ်မြုပ်မှုမှာ ဒီနေ့ညနေအထိ ရုပ်အလောင်း ၆၀ နီးပါးကို ဆယ်ယူရရှိထားတယ်လို့ ကနီမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းထွန်းဝင်း က ပြောပါတယ်။
ရေယာဉ်ထဲမှာ လောလောဆယ် အလောင်း ၇ လောင်းကို ထပ်တွေ့ထားတယ်လို့ ကနီမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းထွန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။
"ကရိန်းနဲ့ ဆောင့်ပြီး အမိုးကိုဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော် အခုခေါင်းပိုင်းကိုစဖွနေတယ်၊ ခေါင်းပိုင်းမှာ အခုလောလောဆယ် အလောင်းတွေ ၄ ၅ ၆ လောင်းလောက် ထုတ်ပြီးပြီ၊ ခေါင်းခန်းထဲက ပိုက်ဆံအိတ် တွေ ရတနာပစ္စည်းတွေ အဲ့ဒါတွေကိုထည့်နေကြတယ်၊ တစ်ခန်းခြင်းဖွနေတာ အခုဖော်နေတာ ဟုတ်တယ်ဖော်နေတာ ပေါ်နေပြီ ၇ လောင်း ၈ လောင်းလောက်ရှိသွားပြီ"
ရေယာဉ်နစ်မြုပ်မှုကြောင့် သေဆုံးသူတွေအတွက် ရည်စူးပြီး ရက်လည်ဆွမ်းသွတ်ပွဲကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက ဒီနေ့ ကနီမြို့နယ် မိချောင်းတွင်းကျေးရွာ၊ သာသနာ့ရက္ခိတ ကျောင်းတိုက်မှာ ကျင်းပခဲ့ရာ သေဆုံးသူတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တချို့လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မိချောင်းတွင်းကျေးရွာအနီး ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ သံဃာတော်တွေက ရေယာဉ်နဲ့ ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။
from သတင်းမဵား http://ift.tt/2eHipSQ
အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာန CDCက ဇီကာဗိုင်းရပ် ကူးစက်ခံနိုင်ရတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက် နှိုးဆော်ချက် ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံပေါင်း ၁၁ နိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံလည်း ပါဝင်လာပါတယ်။
from သတင်း | Burmese – VOA http://ift.tt/2cR2fDA
Posted on September 2, 2016 by freeburma
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကောလင်းမြို့နယ်အတွင်း ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်ပွားမှု မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – တေဇလှိုင် / ဧရာဝတီ)
မြန်မာနုိုင်ငံတွင် ယခုနှစ် မိုးနှောင်းကာလ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုန်တိုင်း ၃ ခုမှ ၅ ခုအထိ ဖြစ်ပေါ်နုိုင်ပြီး ရေကြီးမှု အခြေအနေ ဆုိုးဝါးနုိုင်ကြောင်း မုိုးလေ၀သ ပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ခန့်မှန်းပြောဆုိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် ယခုအချိန်အထိ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲတွင် မေလကဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (ROANU) တလုံး တည်းသာဖြစ်သေးခဲ့ကြောင်း၊ မကြာခင်မိုးကုန်တော့မည်ဖြစ်ပြီး မိုးကုန်သည်အထိ ယင်းမုန်တိုင်း တလုံး တည်း သာရှိလိမ့်မည်ဖြစ်၍ မိုးရာသီအကုန် မိုးလွန်ကာလ အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ ၃ လအတွင်း တွင် မုန်တိုင်း များစုပြုံပြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း ၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ ၁၀ နှစ်အတွင်း နှစ်အလုိုက် ပျှမ်းမျှအားဖြင့် မိုးနှောင်း ကာလ ၃ လအတွင်းဖြစ်သည့် မုန်တိုင်း အရေအတွက် ၃ လုံးအထက်ရှိကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ဆုိုသည်။
“ဒီနှစ်မိုးလွန်ကာလမှာလည်း ဆရာက မုန်တိုင်း ၃ လုံးကနေ ၅ လုံးအထိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မှန်းထား တယ်။ ဘင်္ဂလား ပင်လယ် အော်မှာ။ မုန်တိုင်းအနေအထားကတော့ အဲဒီအတိုင်းရှိတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
၂၀၁၆ မိုးရာသီ မိုးလယ်ကာလသည် မကြာခင်ကုန်ဆုံးတော့မည်ဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာမိုးနှောင်းကာလအတွင်းမှာပင် မုတ်သုံ ပြန်ဆုတ်ခွာ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မုိုးရွာသွန်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မိုးရေချိန်သည် မုိုးဦးရာသီမှမုိုးလယ်ကာ အထိ အတက်အကျ ရှိသော်လည်း အားလုံး ကိုခြုံငုံပြောပါက ယခုနှစ် မိုးကောင်းသည်ဟု ပြောနိုင်ကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းလွင်က သုံးသပ် သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် မုိုးရာသီကာလတွင် တနှစ်လျှင် ရေကြီးမှု ၃ ကြိမ် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပြီး ယခုအခါ ဒုတိယရေကြီးကာလ ပြီးသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ စက်တင် ဘာ တွင် စတင်မည့်တတိယရေကြီးကာလသုို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး တတိယ ရေကြီးကာလတွင် ရေကြီးမှုသည် အနည်း ငယ်အခြေအနေဆိုးနိုင်ကြောင်း ၎င်းက သုံးသပ် ပြောဆုိုသည်။
“မုတ်သုံရယ်၊ ဘင်္ဂလားပင်အော်ဖြစ်တဲ့ မုန်တိုင်းရယ်၊ အရှေ့ဘက်ကရွေ့လာတဲ့ လေပွေလှိုင်းရယ် ၃ ခုစလုံးသွားဆုံတယ်။ ဒါလေးတခုကိုခြွင်းချက်တခုအဖြစ်သိထားသင့်တယ်။ အဲလိုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ တတိယရေကြီးကာလရဲ့ရေကြီးမှုဟာ ပြီး ခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်ရေကြီးမှုကိုမမီပါဘူး။ သာမန်အားဖြင့်တော့မမီပါဘူး။ သို့သော်ခြွင်းချက် အဲလိုတိုက်ဆိုင်မယ်ဆိုရင် တော့ ရေကြီးတာဟာနည်းနည်းဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာထွန်းလွင်က သတိပေးသည်။
၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေသည် အလွန်အမင်းမြင့်တက်ပြီး ရေကြီးခဲ့ဖူးကြောင်း၊ ပဲခူးတုိုင်း ပြည်မြို့ ရွှေဆံတော် ဘုရား ခြေရင်း တည်ထားသည့် ခြင်္သေ့ကြီးများ၏ခြေရင်းရောက်သည်အထိ ဧရာဝတီမြစ်ရေတက်ခဲ့သည်အထိ ရေကြီးမှု ဆုိုးဝါးခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောပြသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် ရေကြီးမှုဒဏ်ကို မန္တလေး၊ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ မကွေး၊ ရန်ကုန်၊ စစ်ကိုင်း၊ မွန်၊ ကချင်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူဦးရေ ၄ သိန်းကျော် ခံစားခဲ့ရပြီး နိုင်ငံတ၀န်း စိုက်ပျိုးဧကစုစုပေါင်း ၅ သိန်းကျော် စံချိန်တင် ရေနစ်မြုပ်ခဲ့ရကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
“ရေတွေပြန်ကျသွားပြီ။ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေ မရှိသလောက်ပဲ။ ကျောင်းကုန်းမှာပဲကျန်တော့တယ်။ ပျက်စီးသွားတဲ့စပါး ခင်းတွေ ပြန်စိုက်နေကြပြီ။ တချို့ကတော့ နောက်ရေတခုရှိသေးတယ်ဆိုပြီးသိထားတော့ မစိုက်သေးတာလည်းရှိသေး တယ်” ဟု ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန်းစိုးက လက်ရှိအခြေအနေကို ပြောသည်။
The post မိုးနှောင်းကာလ မုန်တိုင်းများဖြစ်ပေါ်ပြီး ရေကြီးမှု အခြေအနေဆုိုးနုိုင်ဟုဆုို appeared first on ဧရာဝတီ.
from ဧရာဝတီ http://ift.tt/2bGXfCA
Posted on August 26, 2016 by freeburma
သြဂုတ်လ ၂၄ ရက် ငလျင်ကြောင့် ရှေးဟောင်းပုဂံဘုရားစေတီ ၂၀၀ နီးပါး ပျက်ဆီးခဲ့တာဟာ လူသားတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ UNESCO က ပြောပါတယ်။ ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အတွက် UNESCO က အကူအညီ ပေးမယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ AP သတင်းကို မအင်ကြင်းနိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။ Originally published at – http://ift.tt/2bTl0El
from VOA Burmese (uploads) on YouTube https://www.youtube.com/watch?v=HpKELzXBvKg
Posted on August 25, 2016 by freeburma
from VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2bRTOFF
Posted in Disaster - ဘေးအန္တရယ်များ	| Tagged Cabinet, Disaster, Feedly, IFTTT	| Leaveacomment |
from သတင်း | Burmese – VOA http://ift.tt/2bQrjrY
Posted on August 24, 2016 by freeburma
သြဂုတ် ၂၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၅ နာရီ ၅ မိနစ်လောက်က နေပြည်တော်မှာ ငလျင်လှုပ်သွားခဲ့ပြီးနောက် လွှတ်တော်အတွင်း အပျက်စီးများ မြင်တွေ့ရစဉ်။
ဓာတ်ပုံ – Thiri Yadanar
The post ငလျင်ကြောင့် လွှတ်တော်အပျက်စီး မြင်ကွင်းများ (ဓာတ်ပုံ) appeared first on DVB.
from DVB http://ift.tt/2bFXLje
from သတင်း | Burmese – VOA http://ift.tt/2bw9kJf
ဒီနေ့ညနေ လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ငလျင်ကြောင့် မြောက်ဦးမြို့ ရတနာ့မာန်အောင် စေတီ စိန်ဖူးနှင့် ကျောက်ထီးတော် မြေခခဲ့။
ဓာတ်ပုံ – အောင်ကိုကို
The post မြောက်ဦးမြို့ ရတနာ့မာန်အောင်စေတီ စိန်ဖူးနှင့် ကျောက်ထီးတော် မြေခ (ဓာတ်ပုံ) appeared first on DVB.
from DVB http://ift.tt/2bNA2eg